Ugu yaraan 20 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay suuq kuyaala Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan 20 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay suuq kuyaala Muqdisho
February 19, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Ugu yaraan 20 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay suuq kuyaala Muqdisho. [Xigashada Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wax loo malaynayo in uu ahaa weerar isbiimayn ah ayaa lala eegtay suuq mashquul badan oo kuyaala degmada Wadajir ee gudaha Muqdisho, waxaana lagu dilay ugu yaraan 20 qof, sida ay sheegayaan ilo-wareedyadu.
Qaraxa ayaa ka dhacay gudaha suuqa Kaawo-godey ee magaalada Muqdisho maanta oo Sabti ah, iyadoo dadku ay suuqa ka dukaamaysanayeen.
Intooda badan dadka dhintay ayaa ah shacab.
Waxaa laga baqayaa in tirada dhimashadu ay korodho.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkaas maanta oo Sabti ah, balse waxaa looga shaki qabaa ururka hubaysan ee Al-Shabaab, kuwaasoo weeraro kan lamid ah qaaday mudadii lasoo dhaafay.
December 22, 2016 Ciidamada ammaanka Puntland oo howgalo ka dhan argagixisada ka bilaabay magaalada Boosaaso
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s national forum between the Somali political leaders opened on Wednesday in the capital, Mogadishu. The meeting was attended by Somali President, Prime Minister, and the Presidents of Puntland, Jubaland, South West and [...]